Ihe omume AutoCAD maka iji nyocha CivilCAD na Total Station
Nke a bụ otu n'ime nkuzi kachasị mma m hụrụ, ọkachasị maka ndị ọrụ CivilCAD na-enwe olileanya ịme usoro nyocha na Civil3D ga-ewe ọtụtụ usoro na mgbagwoju anya. Ewubela akwụkwọ a ma wepụta ya na webụ site n'aka Injinia Manuel Zamarripa Medina, onye ọtụtụ ga-ekele maka ihu ọma ya nke ...
Akụziri CAD / GIS, GPS / Equipment, topografia
Debe mpaghara cross-sections na CivilCAD
N'isiokwu a, anyị na-anabata ihu ọhụụ nke saịtị gọọmentị CivilCAD, nnukwu ọrụ sitere na ndị enyi nke ARQCOM n'ehihie nke ịtụgharị afọ 15 yana karịa ndị ọrụ 20,000 na Latin America. Na ya ọhụrụ ngalaba "Nkuzi" na-akpali ọrụ e gụnyere a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ mgbagha. ...
Nchịkọta nchịkọta UTM site na iji CivilCAD
Na nso nso a, ana m ekwu maka CivilCAD, ngwa nke na-aga na AutoCAD yana na Bricscad; oge a achọrọ m igosi gị otu esi ewepụta tebụl nhazi, dịka anyị hụrụ ka emere ya Microstation Geographics (Bentley Map). Ọtụtụ mgbe ihe ndị a GIS mmemme nwere ya bara uru, mana na ọkwa CAD ọ ka na-adọkpụ, ...
Mepụta mmezi na CivilCAD
Edemede m gara aga kọwara ihe gbasara CivilCAD, ngwa ngwa bara uru maka AutoCAD na Bricscad. Ugbu a, achọrọ m ịga n'ihu na mmega ahụ na-adabere na usoro ọgụgụ isi nke ọdụ ụgbọ elu anyị gara aga, na-arụ ọrụ na ntinye na ụdị dijitalụ. N'ihe banyere CivilCAD a na-akpọ nke a oru ngo, ọ bụ ezie na ebe ọ bụ na ...
Nzọụkwụ dị elu na AutoCAD - dabere na data site na Total Station
Etu esi ewepụta usoro akara anyị ejirila mmemme ndị ọzọ mee. N'okwu a, Achọrọ m ime ya na mmemme nke otu n'ime ndị ọkachamara kachasị mma m gosipụtara m na ọzụzụ ọzụzụ; nke ọ maara banyere ya ma nke ọ na-enwechaghị mmasị na ya n'oge ndị a. Aga m achịkọta akụkụ mbụ n'ihi na ọ na-eme ...
AutoCAD-AutoDesk, Apụta, GPS / Equipment, topografia
Usoro nke AutoCAD maka ndị ọrụ Microstation
Izu a bụ ụbọchị afọ ojuju, m na-akụzi usoro AutoCAD maka ndị ọrụ Microstation, dị ka ịga n'ihu nke usoro topography nke anyị nyere ụbọchị ole na ole gara aga site na iji CivilCAD iji mepụta ụdị dijitalụ na akara akara. Isi ihe mere anyị ji mee ya bụ n'ihi na n'agbanyeghị ...
AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley